Jubbaland Oo Ka Digtay Dagaal Ay La galaan Dawlada Soomaaliya (AKHRISO) – XAMAR POST
Warsaxaafadeed kasoo baxay Maanta Dawlad Gobolleedka Jubbaland ayaa looga hadlay Gaadiid Dagaal iyo ciidan Dawlada Federaalka Jimcihii shalay u daabushay Deegaano Katirsan Gobolka Gedo.
Madaxtooyada Jubbaland ku eedeysay Madaxweyne Farmaajo inuu Colaad hurin ka abaabulayo Gobolka Gedo xilli Jubbaland isku dayeyso ka jawaabida Xaalada abaareed ee ka taagan Gobolkaasi.
Qoraalka Jubbaland ayaa lagu yiri “waxaa Nasiib daro ah In Halkii Dawlada Federaalka doorkii ay ka geysan laheyd ay Gobolka Gedo oo awalba la il daranaa ay weli kusii daabuleyso Hub,Ciidan iyo Gaadiid Dagaal”.
Waxay Jubbaland sheegtay inay Cadeneyso wixii mas’uuliyad ka dhasha gulufkaasi Colaadeed uu qof ahaan u yeelan doono Madaxweynaha Muddo xilleedkiisa dhamaaday Ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna noqon doonto xad gudub aan weligiis ka harin waa sida ay Jubbaland Qoraalka ku sheegtay.
Dawlad Gobolleedka Jubbaland ayaa geba gabadii warsaxaafadeedkeeda ku sheegtay in Umadda Soomaaliyeed iyo Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka war gelineyso in Baaq dhowr jeer soo jeediyeen oo Colaadaasi lagu hor istaagayo balse laga dhego fureystay.
DHAGEYSO: Kenya Oo Mideysay Waddaniyadii Dadka Soomaaliyeed